250A Cable Accessories Vagadziri & Vatengesi | China 250A Cable Chishongedzo Fekitori
25kV 250A Yakarurama Connector
Anhuang nyanzvi Straight connector, isu kupa yepamusoro Straight connector. Zvimiro: ● Inopa yakatarisana yakazara uye izere nekunyudza inopatsanurwa kubatana kana yasangana neiyo chaiyo bushing kana plug. ● Yakavakirwa-mukati capacitive bvunzo poindi yekutarisa mamiriro wedunhu kana kuisa chinokanganisa chiratidzo ● Hapana zvishoma zvinodiwa chikamu chekubvisa. ● Kubhururuka kunogona kuve yakamira, yakatwasuka, kana chero kona pakati. Kushanda: • Kubatana kwepolymeric tambo kune shanduko, switchgear, mota ...
25kV 250A Load kutyora Elbow Connector
Anhuang nyanzvi mune Loadbreak Elbow Connector, isu tinopa mhando yepamusoro Loadbreak Elbow Connector. Zvimiro: l Inopa yakazara yakavhenekwa uye izere nekunyudza inosanganisirwa kubatana kana wasangana neyakakodzera bushing kana plug. k Yakavakirwa-mukati capacitive bvunzo poindi yekutarisa mamiriro wedunhu kana kuisa yekukanganisa chiratidzo. k Hapana pasipasi chikamu chekubvisa chinodiwa. l Kuisa kunogona kuve yakatwasuka, yakatwasuka, kana chero kona pakati. Kushanda: l Zvekubatana kwepolymeric tambo kune ma transformer, swi ...
25kV 250A yakadzivirirwa inodzivirira cap
Anhuang nyanzvi Inodzivirirwa Inodzivirira Cap, isu tinopa yepamusoro Insulated Inodzivirira Cap. 25kV 250A Yakasungirirwa Inodzivirira Cap chishongedzo chinogadzirirwa kuti dzigadzire magetsi uye zvine hungwaru chisimbiso mutoro kuputsa bushing mukati kumeso. Kana uchinge wasangana nemutoro wekutsemura chigadzirwa uye iyo yekudonha waya yakasungirirwa pasi, iyo Insulated Inodzivirira Kapu inopa yakazara yakadzivirirwa, inonyudza inodzivirira chifukidzo chemasimba akasimba. Iyo Yakasungirirwa Inodzivirira Cap inogona kushandiswa zvachose kana kwenguva pfupi ...
25kV 250A yakawedzerwa Apparatus Bushing ine siketi
Anhuang nyanzvi Lengthen midziyo Bushing, isu kupa yepamusoro Lengthen midziyo Bushing. Nhanganyaya: 25kV 250A Zvishandiso Bushing inopa iwo maratidziro eiyo 200A Cable yekubatanidza uye anonyanya kushandiswa pamafuta-akaisirwa mafuta (R-temp, hydrocarbon, kana silicone) zvishandiso, zvinosanganisira switchgear, maTransformers, uye ma capacitor. Iwo maApparatus Bushing akaumbwa achishandisa mhando yepamusoro Epoxy Rubber, inosangana nezvinodiwa zve standard EN50180 / EN50181 DIN47636 / HN52-S-61. Zviri mukati mekiti: ● Zvishandiso bushi ...
25 kV 250A Zvishandiso Bushing
Yakajairwa: ● DIN 47636-7-1990 Simba tambo ine yekuwedzera makoni, akapatsanurwa, neUm pazasi pe35kV Sub-yekubatanidza mudziyo saizi IEEE. ● IEC60502 Yakavharwa tambo dzemagetsi dzakapetwa nemitero yakatarwa kubva pa1 kV (Um = 1.2 kV) kusvika ku30 kV (Um = 35 kV) uye anowedzera; ● IEC61442 Bvunzo nzira dzezvishongedzo zvemagetsi tambo ane akayera voltages kubva ku6kV (Um = 7.2kV) kusvika 30kV (Um = 35kV); ● GB 12706-2002 Yakawedzerwa ...